Ny governemanta Tiorka dia nanitatra ny fivahinianan'ny seranam-piaramanidina Fraport TAV Antalya afaka roa taona
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Ny governemanta Tiorka dia nanitatra ny fivahinianan'ny seranam-piaramanidina Fraport TAV Antalya afaka roa taona
Ny fandoavana ny saram-pandraharahana isan-taona dia nahemotra ho an'ny 2022 hatramin'ny 2024
Fraport AG dia mpiara-miasa manolo-tena sy azo antoka amin'ny fitantanana sy fampandrosoana ny Seranam-piaramanidina Antalya (AYT).
Ny AYT dia nanompo efa ho 35.5 tapitrisa tamin'ny 2019, nahatratra mpandeha an-tsoratra mandrakariva
Fraport AG miarahaba ny fanapaha-kevitry ny governemanta Tiorka hanitatra ny kaonferansa ankehitriny hitantanana ny seranam-piaramanidina Antalya hatramin'ny roa taona hatramin'ny faran'ny 2026 ary hampihemotra ny fandoavana ny saram-pifanampiana isan-taona amin'ny 2022 hatramin'ny 2024. Ity fifanarahana ity dia hanampy ny Fraport TAV Antalya fiaraha-miombon'antoka amin'ny fandefasana indray ny seranam-piaramanidina Antalya amin'ny làlana maharitra, mitazona ny fitohizany mandritra ny fotoan-tsarotra toy izany.
Nandritra ny roapolo taona mahery, Fraport AG dia mpiara-miasa manolo-tena sy azo itokisana amin'ny fitantanana sy fampandrosoana ny Antalya Airport (AYT). Nandritra ny taona maro, Fraport TAV Antalya dia nahasarika zotram-piaramanidina sy zotra bebe kokoa ary nanatsara ny traikefan'ny mpandeha. Antalya dia nanjary vavahady iraisampirenena mankamin'ny faritra fizahan-tany lehibe indrindra sy lehibe indrindra any Torkia - ary iray amin'ireo tanjona lehibe indrindra eto amin'ny Ranomasina Mediterane. Fraport dia manantena ihany koa ny fotoana hanohizana ny fiaraha-miasa Antalya ao anatin'ny am-polony taona ho avy.
Hatramin'ny niandohan'ny taona 2020 ary nitohy tamin'ny 2021, ny areti-mandringana manerantany sy ny famerana ny dia dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fiaramanidina. Amin'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny manampahefana rehetra, Fraport TAV Antalya dia namaly haingana tamin'ny fampiharana ny fidiovana Covid-19 feno sy ny fepetra fiarovana ho an'ny mpandeha ary mitazona ny fahaizan'ny opérasiona. Ny famerenana amin'ny laoniny ny fahaverezan'ny fifamoivoizana mifandraika amin'ny Covid-19 dia mitaky fitohizana sy fanoloran-tena, miaraka amin'ny fotoana sy faharetana avy amin'ireo mpandray anjara rehetra.
Ny AYT dia nanompo efa ho 35.5 tapitrisa tamin'ny 2019, nahatratra mpandeha an-tsoratra mandrakariva. Tamin'ny taona 2020, ny fifamoivoizan'i Antalya dia nidina hatramin'ny 73 isan-jato isan-taona ka hatramin'ny 9.7 tapitrisa, tao anatin'ny fiantraikan'ny areti-mandringana manerantany.
Google dia nandoa $ 1.33 tapitrisa noho ny filaharan'ny hotely mamitaka
Teratany alemanina, Markus Krebs dia nanendry mpitantana jeneralin'ny Outrigger Reef Waikiki Beach Resort any Hawaii